Waa maxay tirada gawaarida firfircoon ee ka shaqeeya dusha basaska EGO? | RayHaber | Wadada Tareenka | Wadada weyn | cable baabuur
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraWaa maxay tirada gawaarida firfircoon ee ka shaqeeya dusha basaska EGO?
09 / 11 / 2019 Levent Ozen 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, ego, GUUD, WADADA, HAY'ADAHA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY 0
2012, oo leh Sharciga No. 6360, xuduudaha aagga ku dhow ayaa la ballaariyey oo tirada degmooyinka ku yaal aagga ku dhow ayaa ka kordhay 16 ilaa 25. In kasta oo tirada dadka reer Ankara ay korodhay 2013 inta u dhaxaysa sannadihii 2018-9, duullimaadyada basaska EGO ayaa hoos u dhacay 20%.
Iibsigii ugu dambeeyay ee baska EGO ee Agaasime Guud ee Degmadda Ankara ee Magaalo Weynta Magaalada Ankara waxaa lagu sameeyay 2013. Sidaa daraadeed, celceliska da'da basasku waxay korodhay 10.5. Tani waxay keenaysaa in gawaarida si xun u shaqeeyaan si joogto ah una kordhiyaan kharashka dayactirka iyo hagaajinta.
Sababtoo ah tirada basaska oo aan ku filnayn, baahida adeegga gaadiidka dadweynaha ee muwaadiniinta halkan ku nool iyadoo ay kordheen degsiimooyinka cusub lama buuxin karo illaa inta la codsaday.
2019 Sida sanadka, tirada gawaarida firfircoon waa 1540. Lambarkan waxaa ku jira 97 1999 model Solo iyo Bellows basaska. Nolosha dhaqaalaha ee basaskaas awgeed, adeegu si joogto ah ayuu u dumiyaa. Fashiladan ayaa sababaya in barnaamijka adeegga la joojiyo maalinta dhexdeeda. Gawaarida qaar looma isticmaalo gabi ahaanba.
Qaab dhismeedka xogtan ee la xiriirta heerka diyaaradda basaska hadda jirta, nasiib darro suurtagal ma ahan in la furi karo khadad cusub ama la kordhiyo adeegga marinnada leh cufnaanta rakaab sarre. Xaaladdaani waxay muwaadiniinta u keentaa dhibanayaal.
Agaasinka guud ee “EGO” wuxuu ka sameeyaa daraasadaha khadka kobcinta khadka dhammaan magaalada Ankara si loo hubiyo sida ugu hufan uguna waxtarka badan ee basaskooda jira. Ujeedadaas awgeed, koox ayaa laga dhex aasaasay ururka dhexdiisa. Kooxdan ayaa marka hore wax ka qaban doonta khadadka dhibaatada waxayna soo saari doonaan xalal sida ugu dhaqsaha badan.
Taas waxaa dheer, adoo u dhowaanaya dhibaatooyinka gaadiidka iyo taraafikada ee Başkent Ankara oo leh aragti guud oo miyir leh iyo siyaasadaha gaadiidka iyo farsamooyinka gaadiidka casriga ah, waxaa muhiim ah in la hubiyo in go'aamada garsoorka, cadaalad iyo isku dheelitiran ay ka madax banaanaadaan siyaasad. ujeedadeedu tahay inay kaafiso baahiyaheeda sida ugu macquulsan ee leh jawiga deegaanka, casriga, dhaqaalaha iyo nidaamyada gaadiidka dadweynaha ee jaban.
tirada gawaarida firfircoon ee agaasinka guud ee lacagta
Tirada Saldhigyada Akcaray Kordhay 15
Laba bas oo ka socda EGO ilaa degmada Mostar
Jadwalka EGO ee Iskuulada Eymir